Wepu weebụsaịtị gụnyere ịchịkọta ma ọ bụ iwe ihe ọmụma weebụ na nchekwa ụgbọala nchekwa mpaghara. Enwere ike iwepu data site na saịtị ma chekwaa ya na mpaghara ebe eji A1 website wepu ihe. Ị nwere ike ikpokọta ma jikọta ihe dị iche iche nke ozi weebụ maka ịmepụta mmepụta data data. Tụkwasị na nke a, ịnwere ike nyochaa URL iji wepụ data na ịmepụta CSV yana faịlụ SQL. Ị nwere ike mbupụ ozi a na drive mpaghara ma ọ bụ chekwaa ya na nchekwa data dịka data data SQL.
Ntuziaka SEO a nwere ihe ndị dị mkpa iji jiri mkparịta ụka Web URL kpochapụ - мягкая садовая мебель.